Mgbe atụnyere Pterostilbene Vs Resveratrol, ị ga-achọpụta na e nwere ọtụtụ eziokwu na ị na-efu efu banyere abụọ. Ibi ndụ dị mma chọrọ ka ị kwuo okwu banyere nri siri ike, na-emega ahụ yana ọgwụ kwesịrị ekwesị. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịlele ihe ndị a niile, mana nsogbu ụfọdụ dị ka nsogbu akwara nwere ike ịdịgide.
Ọzọkwa, ịkwesịrị ịghọta mmeju ahụ nwere Pterostilbene na Resveratrol nwere ike inyere gị aka ijikwa ụfọdụ n'ime ha. Dịka ụlọ ọrụ ọgwụ na-etinye ọgwụ ndị a na mgbakwunye, ọ na-abụ ihe ịma aka ịchọpụta nke kachasị mma maka ahụike gị. Ya mere, anyị ga-enyocha nyocha zuru ezu mgbe anyị na-agwa okwu ogologo pterostilbene na pterostilbene resveratrol.
Gịnị Bụ Resveratrol?
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ mmadụ kwalitere mmanya na-acha ọbara ọbara, na-arịọ ya ka o nwee ọtụtụ uru ahụike. Otú ọ dị, ihe a na-enweghị ike ịkọwa bụ etu o si eweta uru ọgwụgwọ ndị a n'ahụ. Ọzọkwa, ị ga-amata na e meela ọtụtụ ụdị nyocha gbasara mmanya na-acha ọbara ọbara, o doro anya na ọ nwere ngwakọta nke na-erite uru ahụike anyị.
A na-eme mmanya na-acha ọbara ọbara site na mkpụrụ vaịn nke Resveratrol bụ otu n'ime ogige ndị nọ n'ọrụ. Resveratrol sitere na otu a maara dị ka polyphenol na nke a na-akpọkarị stilbenoid. Ọ bụghị eziokwu na ịnwere ike ịnweta Resveratrol na mmanya, mana ụzọ ndị ọzọ sitere n'okike na-agụnye ahụekere na mkpụrụ osisi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mmanya abụghị mmanya kachasị amasị gị, ị nwere ike ịzụta ya ihe mgbakwunye resveratrol kachasị mma dị.
Gịnị bụ Pterostilbene?
N'ihe banyere Pterostilbene Vs Resveratrol, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ụdị nyocha ejirila na Resveratrol. Otú ọ dị, uru Pterostilbene banyere ahụike nwere ike karịa nke Resveratrol, ọ bụ ezie na ogige ndị a yiri ibe ha na usoro ma na-eme ihe dị iche na ahụ mmadụ. Agbanyeghị, Pterostilbene ịbụ antioxidant eke ọ na - apụtakarị na bluuberi. Ọ bụ ezie na, isi mmalite pterostilbene ndị ọzọ gụnyere mulberries, almọnd mkpụrụ vaịn ọ bụ ezie na ha na-erite na obere ọnụọgụ. Ọzọkwa, ọ nwere ọnụọgụ absorption dị elu na ụba njirimara oxidation ma e jiri ya tụnyere Resveratrol. Ọzọkwa, ị nwere ike ịzụta a Resveratrol emeju ma ọ bụrụ na ịnweta mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ịbụ nsogbu nye gị.
Pterostilbene Vs Resveratrol, kedụ ikike nri?
Ajuju nke usoro onu ogugu abughi ezigbo nchegbu nye otutu ndi mmadu n’ebe ahu. Agbanyeghị, ọ dịkwa mma ịghọta na ụfọdụ mgbakwunye nwere mgbatị dị elu nke Pterostilbene ma ọ bụ Resveratrol karịa ndị ọzọ. Yabụ, tupu ikpebi ihe kwesịrị ekwesị, ike gwụrụ gị ike. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-a aụ iko mmanya na-acha ọbara ọbara, ị nwere ike ịnweta 1mg nke Resveratrol.
Dika otutu usoro onodu ogwu siri di otutu ihe nwute, ma aburula nsogbu ahu. Azụ ahịa resveratrol usoro azụmaahịa na-abụkarị n'etiti 50 ruo 250mg. Ọ bụla ọgwụ resveratrol gafere ụdị a nwere ike ibute nsonaazụ ụfọdụ.
N'aka nke ọzọ, Pterostilbene na-apụta na mkpụrụ osisi na obere ego (ihe dịka 0.03mg na bluuberi); ya mere, ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ị na-eji resveratrol ntụ ntụ na-arịọ arịrịọ. Otú ọ dị, ọ dị elu bioavailable ma e jiri ya tụnyere Resveratrol. Ka ọ dị ugbu a, a maghị ezigbo ọgwụ pterostilbene n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịnọ n'ahụ ya ruo ụbọchị asaa.
Pterostilbene Vs Resveratrol Uru Ahụike
Enwere ọtụtụ uru ahụike ị na-enweta mgbe ị jiri Pterostilbene Vs Resveratrol. Ogige ndị a enweghị mmetụta dị egwu dịka ọgwụ ndị ọzọ anyị hụrụla n'ahịa. Ka anyị leba anya n’ihe onye ọ bụla nwere inye.
Resveratrol na pterostilbene cancer nwere uru
Ọtụtụ mmadụ na-emefu nnukwu ego ọgwụ cancer ruo na ha enweghị ike ịkwado onwe ha ọzọ. Ọzọkwa, e nwere ụdị ọrịa kansa dị iche iche dịka kansa prostate, ọrịa cancer akpa nwa, na ọrịa ara ure, na ndị ọzọ, nke ekwesiri ịgwọ iji zere ịnwụ na mbido.
Pterostilbene palsy nwere ọrụ dị mkpa ma a bịa n'ihe banyere mgbasa na ọnwụ nke mkpụrụ ndụ kansa. E nwere ihe karịrị otu ọnọdụ nke nwere ike ime ka mkpụrụ ndụ nwere ahụike tobe n’ime sel kansa. Agbanyeghị, Pterostilbene na-egbochi mkpụrụ ndụ ndị a itolite ma bidokwa usoro a na-akpọ apoptosis nke na-ebute mbibi onwe nke mkpụrụ ndụ kansa. Ọzọkwa, ọ ga-ezere mbufụt NFκB.
N'aka nke ọzọ, Resveratrol nwere ike inyere ndị ọrịa cancer aka site na ime ka ahụ nwee nsogbu nke anụ ahụ megide ịba ụba cell cell. Ejikọtara ihe ndị a n'efu na mmepe nke mkpụrụ ndụ cancer na ọkwa mbụ.
Uru Cardiovaskụla nke Resveratrol na Pterostilbene
Obi anyị dị ka njin nke na-achịkwa ụgbọ ala. Mgbe obula nuru anaghi aru oru nke oma, oputara na a ga-ebelata obara obara, nke nwere ike, na emechaa, na ebute nsogbu ndi ozo.
Ọmụmụ sayensị gosipụtara na Pterostilbene nwere ike belata ọkwa LDL (nke a makwaara dị ka cholesterol ọjọọ) na ahụ. Ejikọtara nsogbu obi na ụba cholesterol dị n'ọbara. Yabụ, site na ibelata ọkwa ndị a, a ga-enwe ohere belata nkụchi obi.
N'aka nke ọzọ, Resveratrol na-echebe anyị pụọ n'ọrịa obi na-adịghị ala ala site na ibelata ọbara mgbali elu. Ọ na - arụ ọrụ site na igbochi ọnya ọnya na akwara, wee si otú a nwee ike ịmịnye ọbara nke ọma. Ka ọbara na-aga nke ọma, ohere nke nsogbu obi na-ebelata.
Pterostilbene na iwepu ibu
Inwe oke ibu nwere ike ịbụ nyocha n ebe ị nwere ike ịnweta nsogbu dịka oke ibu. Otú ọ dị, iwelata pound nwere ike inyere gị aka izere nsogbu ndị dị otú ahụ. Resveratrol na-eme ka ọnụọgụ nke metabolism, nke na-enye ahụ gị ohere ịchekwa echekwara abụba. Ya mere, You'll ga-enwe ike belata ibu. N'ihi nke a, ị na - enweta ụdị ebumnuche gị. Ọzọkwa, site na ịrụ ọrụ ikuku nke ọma, ị ga-azụlite usoro ahụ dị mma. N'otu aka ahụ, Pterostilbene na-ebelata ịdị arọ site na iwetulata ọkwa kọlesterol. Agbanyeghị na akwadoghị ka ijikọta arọ ọnwụ ọgwụ a na mmeju a
Abamuru nke Pterostilbene na Resveratrol
Ọnụnọ nke free radicals na ụbụrụ nwere ike ịkpata ọnọdụ dị ka usoro ịka nká na ọrịa Alzheimer. Imirikiti ndị mmadụ na agadi ha na-enwe nsogbu dịka ncheta na usoro ịnụ ihe. Ọ bụ ezie na ọnọdụ ndị a jikọtara ya na neurodegeneration, Pterostilbene, na nri Resveratrol nwere ike ime ka ahụike gị ka mma.
Supplementnweta mmezi resveratrol kachasị mma ga - enyere gị aka imeri mmetụta nke ịka nká. Ọzọkwa, Resveratrol na-abawanye ụba nke insulin-dị ka uto na-akpata. peptides ndị a na –eme ka uto nke neurons (neurogenesis) na akwara ọbara (angiogenesis) na ụbụrụ si otú a na - eme ka ikike ọgụgụ isi kwụsịlata.
Ngwakọta ahụ nwere ike ibelata ọnụọgụ nke dysfunction. N'aka nke ozo, achoputala Pterostilbene dika neuromodulator nke nwere ike, si otú a na-enye ohere maka idezi ihe kwesiri ekwesi. Ọ na - edozi sel ụbụrụ na akwara, si otu a na - arụ ọrụ nke ụbụrụ na - arụ ọrụ nke ọma.
Pterostilbene na Resveratrol maka nchekasị
Inwe ọnọdụ obi dị elu nwere ike ichebe gị pụọ na nsogbu ndị metụtara nrụgide. Agbanyeghi na enwere nhọrọ ọgwụgwọ maka nchekasị, ịda mba, na nchekasị. Pterostilbene nwere ike ịgwọ nchegbu, obi nkoropụ na nsogbu ndị ọzọ.
Ọmụmụ ihe nyochapụrụ chọpụta ka oke ji emeghachi Pterostilbene kwesịrị ịbawanye ọrụ na akụkụ ụbụrụ a na-akpọ amygdala na hippocampus. Ndị a bụ akụkụ dị oke mkpa na ụbụrụ nwere ihe jikọrọ ọnọdụ, nkụda mmụọ na nchekasị. Ya mere, ihe omumu a gosiputara na Pterostilbene nwere ike ịbụ ezigbo ọgwụgwọ ọgwụgwọ maka nchekasị, nrụgide na ịda mba.
Resveratrol ntụ ntụ egosipụtakwala uru ahụike nwere ike iji ya mee ihe mgbe a na-agwọ nchegbu na nsogbu ndị metụtara nrụgide. Na sayensị, o nwere ike na-aru oru site na imekorita ya na Endocannabinoid iji nyere aka mezie ndi nnabata na homonu nke ejikọtara ya na nchekasị.
IIdị Ọrịa Shuga II
Mgbe ị na-eri nri nwere nnukwu nri nke carbohydrates nwere ike ibute ọrịa shuga Typedị nke Abụọ. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị nri carb dị elu na-akpata nsị kama ọ na-ebelata mmetụta insulin. Ka ị na-eru nso ịka nká, ahụ́ gị nwere ike ịmalite ịchọpụta insulin ọzọ. Ya mere, ahụ gị ga-efunahụ mmetụta insulin.
Agbanyeghị, ụfọdụ nnyocha gosipụtara na iri nri Pterostilbene nwere ike inwe ndụ na ndụ gị. Ọzọkwa, nnabata nke na - arụ ọrụ Proxisome na - arụ ọrụ (PPAR-α) nke na - ahụkwa ka ahụ anyị si anabata ngwa ngwa na mmalite nke ketogenesis. N'ihi na Pterostilbene na-akwalite otu PPAR-α si arụ ọrụ, ahụ gị ga-agba ọtụtụ abụba ọkụ, belata ọkwa shuga na ahụ gị. Enweghị njikọ dị n'etiti abetesdị Ọrịa Shuga II na uru Resveratrol n'agbanyeghị na enwere ọmụmụ ihe Resveratrol ugbu a.
Nsonaazụ Pterostilbene na Resveratrol
Tupu ị na-eji mgbakwunye ọ bụla nwere Pterostilbene ma ọ bụ Resveratrol, ị kwesịrị ikpebi mmetụta ọ ga-enwe. A na-ebukarị ọmụmụ ihe na ogige ndị a na ụlọ nyocha, ọ bụghị ọtụtụ n'ime ha na-egosi Pterostilbene na Resveratrol mmetụta utịp. Ọ bụ ezie na ịnara usoro ọgwụ Resveratrol dị elu nwere ike imetụta ahụike gị n'ụzọ na-adịghị mma. Ọ na-ahụkarị ịnweta mmetụta dị nro, mana mgbe usoro ahụ na-adịgide, mgbe ahụ ị ga-agwa dọkịta gị okwu. Agbanyeghị, naanị otu mmetụta Resveratrol ritere ugbu a na-abawanye na ọkwa LDL cholesterol.
Mgbe atụnyere uru ahụike nke Pterostilbene Vs Resveratrol, ị ga-achọpụta ihe dị iche iche. Nke mbụ, ị kwesịrị ịma ma ụfọdụ nsogbu ọ na-akọ nwere ike ibibi ahụ gị. Nke abuo, tulee Resveratrol onunu ogwu choro na nke Pterostilbene. Ọzọkwa, ịghọta usoro onunu ogwu ga-enyere gị aka ịmata ọnụọgụ nke onyinye ị kwesịrị ị na-ewere. Nke ato, nnweta nke ogige nwere ike rụọ ọrụ dị oke mkpa dịka ị gaghị akwụ ụgwọ maka Pterostilbene mgbe ị maara na ị nwere ike nweta mgbatị resveratrol kachasị mma na ọnụego dị elu.
Na mmechi, isi mmalite ahụ dị oke mkpa, anyị maara na ị nwere ike ịchọta supveratrol supplements na ahịa, mana ọzọkwa, enwere ike ịchọta ha na mkpụrụ osisi n'agbanyeghị na ọ dị ala. Yabụ, ọ bụrụ na ị ga - enweta ya ngwa ngwa, ị nwere ike ịdepụta ha dịka ihe kacha mma maka ahụike.
Langcake, P.; Pryce, RJ (1977). "Otu ohuru phytoalexins si grapevines". Ahụmahụ. 33 (2): 151–2. ma ọ bụ: 10.1007 / BF02124034. PMID 844529.
Rimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). "Resveratrol, pterostilbene, na piceatannol na vaccinium mkpụrụ osisi". J Agric Nri Chem. 52 (15): 4713–9. ma ọ bụ: 10.1021 / jf040095e. PMID 15264904.
Macmillan-Crow LA, Cruthirds DL; Ndị megidere (Eprel 2001). "Nyochaa a kpọrọ oku: manganese superoxide dismutase n'ọrịa". Free Radic. Nzuzo 34 (4): 325–36. ma ọ bụ: 10.1080 / 10715760100300281. PMID 11328670.
Sahebkar A, Serban C, Ursoniu S, Wong ND, Muntner P, Graham IM, Mikhailidis DP, Rizzo M, Rysz J, Sperling LS, Lip GY, Banach M (2015). "Enweghị ike nke resveratrol na protein protein C-na-arụ ọrụ na ihe ndị nwere ike ịhọrọ ihe gbasara ọrịa obi-Nsonaazụ site na nyocha nhazi na meta-analysis nke ọnwụnwa a na-achịkwa n'ọchịchị". Int. J. Cardiol. 189: 47–55. ma ọ bụ: 10.1016 / j.ijcard.2015.04.008. PMID 25885871.
1. Gịnị bụ Resveratrol?
2.Gịnị bụ Pterostilbene?
3.Pterostilbene Vs Resveratrol, gịnị kwesịrị ị theụ ọgwụ ole?
4.Pterostilbene Vs Resveratrol Uru Ahụike
5.Resveratrol na pterostilbene nwere uru kansa
6.Agba uru nke Resveratrol na Pterostilbene
7.Pterostilbene na ịba oke
8.Achọpụta uru Pterostilbene na Resveratrol
9.Pterostilbene na Resveratrol maka nchekasị
10.Aria Dike II
11.Side mmetụta nke Pterostilbene na Resveratrol
Anandamide (AEA): Ihe I Kwesịrị Knowmara